Hangzhou Jiande Enterprise yakakurumidza kudana vashandi vanopfuura zana, uye yakapetwa katatu mubhadharo wavo kukurudzira nguva yekuita masiki! Nekuputika kweiyo nyowani coronavirus pneumonia muWuhan, kugadzirwa uye kupihwa mamask kwave musoro wenyaya yeruzhinji. Sekutungamira bhizinesi mu t ...
Zhou Jiangyong akaenda kuJiande maski mugadziri chaomeimask kuti aongorore
Pamasikati aNdira 27, Zhou Jiangyong, nhengo yeDare Rakamira reProvince Party Committee uye Munyori weHangzhou Municipal Party Committee, akaenda kuChaomei Daily Chemical Co, Ltd. (denda rekudzivirira chigadzirwa chigadzirwa) kuti aongorore. Akasimbisa kuti ini ...
Parizvino, kurwira kwenyika kurwisa mabayo kwakakonzerwa neruzivo coronavirus kwatanga. Se "mutsetse wekutanga" wekuchengetedza hutsanana, zvakakosha kupfeka mamask anosangana nedenda rekudzivirira. Kubva N95, KN95 kumarapoti ekuvhiya masiki, zvakajairwa p ...